Habka Safe iyo Sahlan ee Delete iPad Xisaabaadka.
Habka Safe iyo Sahlan ee Delete iPad Account
Mararka qaarkood, waxa dhici kartaa in si aad ka heli naftaada u baahan in ay tirtirto xisaabtaada iPad. Waxaa jiri kara sababo kala duwan waxa ay qoryo beroosh ah. Waxaad la fikirka laga yaabaa inay iska iibiso aad iPad ama aadan u baahan tahay xisaab dambe. Wax kasta oo sabab u yahay, aad leedahay siyaabo sahlan by kaas oo aad sidaas u samayn karaa.
Halkan, waxaan ku qor doonaa talaabooyinka kala duwan kuwaas oo caawin doona in aad ku guulaysato in aad Ujeedada ee la tirtiro account ka aaladaha Apple aad.
1. Delete xisaab email ee iPad
2. Delete account iCloud on iPad
3. Delete account iPad aan password
Delete xisaab email ee iPad
Ka soo qaad in aad bedelay aad email ama xitaa marka aad u muuqdaan in ay ku tumatay aad email, waxaa laga yaabaa inaad tirtirto account ka iPad. Waa kuwan tallaabooyinku fudud oo kuu ogolaaneysaa in aad ku gaarto in.
First of dhan, shid aad iPad iyo madaxa u icon 'Settings ".
Hadda, dul istaagin in ay 'Mail, Xiriirada iyo Calendar' doorasho.
Dhinaca gacantiisa midig, waxaad ka heli doontaa liiska xisaab email kala duwan oo lagu xidhan iPad.
Dooro akoonka aad dooneyso in aad tirtirto oo riix badhanka 'tirtirto'.
Waxaad heli doontaa jawaab degdeg ah ku dooneyso haddii aad rabto in aad tirtirto xisaabta.
Xaqiiji tallaabo aad adigoo gujinaya 'tirtirto' mar kale.
Xusuusnow, tirka account email sidoo kale tirtiri doonaa fariimo ah in aad iPad in ay ahaayeen ku xidhan in aad xisaabta.
Delete account iCloud on iPad
Waa in aad doorato oo kaliya in ay tirtirto xisaabtaada iCloud ka iPad marka aad si dhab ah u hubiso in aad rabto in aad sidaas samayso. Takhalusid xisaabtaada sidoo kale tirtiri doonaa content taas oo ahayd qayb ka mid ah xisaabtaada iCloud. Waxaad si kastaba ha ahaatee waxaa la keenay in doonaa sida in haddii aad rabto in aad sii hayn faylasha.
Si 'Settings "on your iPad dhaqaaq.
Under the 'Settings ", dul istaagin in' iCloud 'oo guji ku yaal.
Madaxa in aad u hooseysa oo waxaad ka heli doontaa doorasho lagu magacaabo 'Saxiix Out'. Riix in.
Marka aad ka jaftaa ku saabsan 'Saxiix Out', waxaad ka heli doontaa fariin digniin, isagoo rumeyn tallaabo aad. Riix 'Saxiix Out' mar kale.
Hadda, aad ogaato doontaa fariin kale oo heegan u ah tirtirka ee xisaabta, waxaad weydiin doonaa sida waxa ay tahay in la sameeyo si ay iCloud xogta Safari iyo Xiriirada ah.
Waxaad dooran kartaa in aad iyaga ku hay iPad ama tirtirto iyaga oo ku saleysan waxa aad door bidayso.
Waxaad u baahan tahay in ay galaan sirta iCloud si aad u noqon karaa 'Raadi My Device ".
Sug in muddo ah ka dibna aad xisaabta iPad noqon doonto guul tirtiray ka iPad.
Ka dib markii talaabooyinkan kaa caawin doona inaad si guul ah u tirtirto xisaabtaada iPad. In qoraalkii ka weyn, ma jiraan wax calaamad soo baxay doorasho sidii aad si fudud u riixi kartaa 'Delete Account "oo aad xisaabta iCloud laga saari doonaa.
Delete account iPad aan password
Mararka qaarkood waxaa dhici kara in aad si illoobi karaan sirta iyo aad weli dooneyso in aad tirtirto xisaabtaada iPad. Xaaladaha noocaas ah, dib u dhici kartaa Wondershare SafeEraser sida ay tahay mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan.
Halkan waxa ku jira qaababka ugu muhiimsan ee Wondershare SafeEraser bixisaa.
Waxay kaa caawinaysaa in si joogto ah la tirtiro xogta taas oo macnaheedu yahay in ay bixisaa wanaajiyey heerarka ammaanka.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si buuxda u masixi qalab aad.
Waxa ay taageertaa badan oo qaabab file kala duwan sida ay u ma aha oo kaliya oo ansixiyay sawiro iyo filimo laakiin sidoo kale tirtiri kartaa Guda wac, fariimaha, Bookmarks, mails iyo in ka badan.
Waxay kaa caawinaysaa in la xorayn, ilaa meel ku saabsan iPhone iyo iPad iyo dardar qalabka yo aad.
Hadda oo aad ogtahay waxa ay ka sugayaan qalab this, waxaan ka wada hadli doonaan tallaabooyinka muhiimka ah in la raaco aawadood tirka xisaabtaada iPad xitaa marka aad qabto wax fikrad ma waxa uu yahay furuhu.
Download ku Wondershare SafeEraser qalab aad kombuutarka oo abuurtaan.
Hadda, xiriiriyaan iPad in your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah.
Marka iPad ku xiran yahay, waxaad ka heli doontaa dhinaca bidix oo ka mid ah qalab Safe Eraser.
Ka hor inta aadan sii wadin tallaabooyinka, waxaad u baahan tahay inaad u tagto aad iPad daruur iyo hubi in ama aan aad 'aragtaan iPad' waa karti. Haddii la soo jeestay oo ku saabsan, waxaad u baahan tahay inaad demisaa.
In barnaamijka, riix qaybta, 'masixi All Data'.
Waxaad ka heli doontaa daaqad cusub kuna waari dhexdeeda aad u baahan tahay in nooca 'tirtirto' sanduuqa degdeg ah si loo xaqiijiyo tallaabada.
Sug in muddo ah ilaa Kabcada_ waa dhameystiran yahay.
Waxaad ka heli doontaa si deg deg ah oo sheegaya in tirtirka la dhamaystiro.
Clear History Browser on iPhone
Delete iPhone Data u Iibinta
Si joogto ah Delete Call History on iPhone
Si joogto ah Delete Messages on iPhone
Si joogto ah Delete Xiriirada ka iPhone
Permenently Delete Photos ka iPhone
Delete Barta bartamaha Search History on iPhone
Clear iPhone Memory ay dib u hanato kaydinta More
Permenently Delete Songs ka iPhone
Si joogto ah Delete Emails ka iPad
Si joogto ah masixi iPad Data hor Iibinta
Delete iPad Apps Permenently
Sidee in ay tirtirto wixii Apps From iPad joogto ah
Sida loo joogto ah Delete Emails ka iPad
Talaabooyinka Sahlan ee Delete Barta bartamaha Search History on iPhone
Sida loo Tijaabi Speed ​​u iPad
Sida loo kala iibsiga xogta ka Samsung Galaxy si iPad
4 Siyaabaha Bedelka Faylal ay si iPad mini bandhigay isha
2 Methods in kaabta iPad Data si Mac OS X in Mavericks
Hab fudud si ay u gudbiyaan Photos hawada iPad in Computer ah
Sidee si ay u gudbiyaan Video ka Computer si ay iPad
Music Transfer ka Computer si ay iPad / iPad mini leh oo aan Lugood
> Resource > iPad > Habka Safe iyo Sahlan ee Delete iPad Xisaabaadka.